Meghan Markle ကြောင့် နာမည်ကြီးလာတဲ့ စျေးချိုချို ဖိနပ်လေးများ – FemaleWear.net
သာမန်အရပ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Meghan Markle ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ နှစ်လယ်လောက်မှာ တော်ဝင်မင်းသား Harry နဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ တော်ဝင်မင်းသမီး တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ရတာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးလည်း သိပြီးသား နေမှာပါ။ အဲဒီတော့ သူမရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တော်တော်များများက အားကျကြမှာ မဆန်းပါဘူး။
ပြီးတော့ တော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Meghan ရဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြောအဆိုနဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံတွေဟာလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ စောင့်ကြည့်စရာ၊ အတူယူစရာ ဖြစ်လာခဲ့ရတာ အမှန်ပါပဲ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အရင်က လူတွေ သိပ်သတိမထားမိတဲ့ အဝတ်အစား၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေ၊ ဒီဇိုင်းလေးတွေဟာ Meghan သုံးလိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း နေ့ချင်းညချင်းထပြီး နာမည်ကြီးလာတတ်ကြတာမျိုးပေါ့။
What holiday dreams are made of ✨🎄🎁📷: @louiseq65
A post shared by Rothy's (@rothys) on Dec 20, 2018 at 9:08am PST
Meghan ဟာ မင်းသား Harry လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သိပ်မကြာခင် လပိုင်းအတွင်းမှာပဲ တော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ့ သြစတေးလျကို သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီခရီးစဉ်မှာ Meghan ဝတ်ထားခဲ့တဲ့ ဖိနပ်လေးတွေဟာ သူမကို စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးသမီးထုကို မျက်စိကျသွားခဲ့စေတယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ Meghan ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီဖိနပ်လေးတွေဟာ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီး စီးလို့ကောင်းတယ်လို့ ထောက်ခံခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့။
အဲဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ Meghan စီးတဲ့ ဖိနပ်လေးကို ထုတ်လုပ်တဲ့ Rothy’s တံဆိပ်လေးဟာ နေ့ချင်းညချင်း ဆိုသလို နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတော့တယ်။ Instagram လို လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာလည်း အဲဒီလို ဖိနပ်လေးတွေကို အပြိုင်အဆိုင် မှာစီးပြီး ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ၊ ဖိနပ်လေးတွေရဲ့ ကောင်းသတင်းလေးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ဝေမျှကြတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေလည်း အများကြီး ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဟုတ်လည်း ဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ Rothy’s တံဆိပ်နဲ့ ဖိနပ်လေးတွေရဲ့ ပုံစံလေးတွေဟာ ပြားပြားဝပ်ဝပ်နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိလှသလို စီးလိုက်ရင် သက်သောင့်သက်သာ ရှိနေမယ့် ပုံစံလေးတွေကို အထင်းသား မြင်နေရတာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စျေးကလည်း တစ်ရံမှ ဒေါ်လာ ၂၀ လောက်ပဲ ကျသင့်မှာဖြစ်တာမို့ ချိုသာတဲ့ စျေးနှုန်းနဲ့ ဝတ်ပျော်တဲ့ ဖိနပ်လေးတွေလို့ ပြောလို့ရနိုင်သေးတာပါ။
Whether you’re going toafestive holiday party or the annual fam dinner – you’re going to need to put shoes on. Let the embroidery do the talking for the night!
နောက်ပြီး… ဒီ Rothy’s တံဆိပ်နဲ့ ဖိနပ်လေးတွေကို Meghan အပါအဝင် အမျိုးသမီးတော်တော်များများက ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဝတ်ဆင်ကြတာဟာ ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီဖိနပ်လေးတွေဟာ ရေသန့်ဘူး၊ အအေးဘူး…. စတဲ့ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ဘူးတွေကို Recycle အဖြစ် အဓိကအသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒါကြောင့် ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ အလုပ်သမား ၉ ယောက်နဲ့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ စတင်ခဲ့ရတဲ့ Rothy’s တံဆိပ်နဲ့ ဖိနပ်လုပ်ငန်းဟာ အခုဆိုရင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၄၅၀ ကျော်ကျော်၊ စက်ပေါင်း ၁၆၀ လုံးတို့နဲ့အတူ တစ်ရက်ကို အလုပ်ချိန် ၂၂ အထိ လုပ်နေရပြီပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးတော့ Meghan လို တော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ သုံးစွဲပြမှုကြောင့် တခြားနာမည်ကျော်တွေကလည်း လိုက်ပါသုံးစွဲလာကြတဲ့ Rothy’s တံဆိပ်နဲ့ ဖိနပ်လေးလုပ်ငန်းဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်နေခဲ့တာမို့ အခုဆိုရင် သူတို့စက်ရုံရဲ့ လုပ်ငန်းအရင်းအနှီးအတွက် $ 32 million လောက်ရှိတဲ့ ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုလည်း ရရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ။
Tags: Celebrity, Prince Harry and Meghan Markle, Shoes